Burren Farmhouse ibonelela ngezinto eziluncedo zale mihla ngomtsalane wakudala wehlabathi.
Kilnaboy, County Clare, Ireland
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguFrank & Martina
Ibekwe eBurren, jonga iNdlela yaseWild Atlantic, iilwandle zeBlue Flag, iindlela zokuhamba kunye needolophu eziphithizelayo zasekhaya. Phumla kunye nosapho lonke kule ndawo yoxolo.
I-Burren Farmhouse ibisembindini wefama esebenzayo ngaphezu kweminyaka engama-200. Indlu yasefama yalungiswa ngo-1850 kwaye yayilikhaya losapho lakwa-O'Grady ukusukela ngelo xesha. Ibuyiselwe ngothando.
Wamkelekile kakhulu kweli khaya likwifama esebenzayo eBurren. Yindawo entle ukonwabela nosapho kunye nabahlobo.
Indlu yasefama ibuyiselwe ukuze ikubonelele ngentuthuzelo kunye noncedo kwikhaya lemveli lokwenyani.
Eli likhaya eliphangaleleyo, labucala. Uya kusetyenziselwa ngokukhethekileyo indlu yasefama iphela, igadi yangaphambili kunye nommandla ongasemva.
Yonwabela eyakho iBurren rockery yabucala kunye nendawo yokuhlala. Zive ukhululekile ukusebenzisa iingubo ezinikiweyo xa uhleli kwenye yeendawo zokuhlala ngaphandle. I-BBQ yegesi iyanikezelwa.
Kukho isantya esiphezulu se-fiber broadband, esilungele ukusebenzela ekhaya ukuba kuyafuneka.
Omabini amagumbi okuhlambela aneshawa zombane.
Ikhitshi epheleleyo ene-pantry yezinto ezibalulekileyo inikezelwa. Ingubo yokucima umlilo inikezelwa; ukongeza kwinzwa yokushisa ekhitshini; kunye neealam zomsi kunye nekhabhon monoxide kwindlu yonke.
Ukukhusela abantwana iifestile eziphezulu zifakelwe izithinteli. Iifestile zinokuvulwa ngokupheleleyo ngumntu omdala ukuba ziyafuneka. Zombini iingcango zegumbi lokuhlambela zifakelwe izitshixo zokukhupha imali ezinkozo kwaye zinokuvulwa ngaphandle kwimeko kaxakeka. Ikhithi yoncedo lokuqala iyanikezelwa.
Umbuki zindwendwe ngu- Frank & Martina
Ndiza kudibana nawe xa ungena kwaye ndikubonise indawo.
Ndihlala kwindlu elandelayo [kwiimitha ezili-100 kude] kwaye ndiya kufumaneka ukuba kuyimfuneko.
UFrank & Martina yi-Superhost